Ra’iisul Wasaaraha Somaliya ‘Rooble’ oo kulan muhiim ah la qaatay Madaxweynaha Jubbaland – HalQaran.com
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa khamiistii maanta kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Labadan mas’uul ayaa kawada hadley in si wadajir ah looga wada shaqeeyo sidii dalku uga gudbi lahaa waqtiga kala guurka doorashaduna ku qabsoonto sidii loo qorsheeyey.
Madaxweynaha Jubbaland iyo R/Wasaare Rooble ayaa si qoto dheer isugula faaqiday in laga wada shaqeeyo sidii ku qabsoomi laheyd doorashada dalka, islamarkaana marxaladda kala guurka ah dalka uga gudbi lahaa.
Ra’iisul wasaaraha cusub ee dalka Maxamed Xuseen Rooble oo ay shalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen Xildhibaannada BF Soomaaliya ayaa tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay, wuxuu kulamo kala duwan la qaatay masuuliyiin kala duwan oo dowladda Somaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka.
Mr. Rooble ayaa looga fadhiyaa inuu soo dhiso Gole Wasiirro cusub oo dalka ka shaqeeya, maadaama kuwa hadda jooga ay yihiin Sii hayayaal xilalka.
Tags: Jubbaland, Kulan Muhiim, Madaxweyne Axmed Madoobe, ra'iisul wasaare Rooble
Donald Trump oo si cad u diiday inuu xilka si nabad ah ku wareejin doono, haddii laga adkaado!